जीवनसाथी खोज्न बोर्डमा विज्ञापन !
काठमाडौँ । जब अधिकांश मानिसहरू प्रेम खोज्न जान्छन्, तिनीहरू डेटिङ एपहरू वा म्याचमेकिंग वेबसाइटहरूमा फर्कन्छन्, वा उनीहरूले साथीहरू मार्फत खोज्ने प्रयास गर्छन् लन्डनका तर मुहम्मद मलिकले पूर्ण रूपमा फरक तरिका अपनाएका कारण अहिले उनको चर्चा विश्वभर भैरहेको छ ।
लन्डनका २९ वर्षीय स्नातक पढेका मलिकले बेलायतको बर्मिङ्घम शहरमा आफ्नो जीवनसाथी खोज्न विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले सामाजिक सञ्जाल, मिडियाका साथै बोर्डमार्फत पनि विज्ञापन गरिरहेका छन् ।
यस्ता विज्ञापनहरूमा यस्तो लेखिएको छ- 'मलाई एरेन्ज विवाहबाट बचाउनुहोस्' र उनको वेबसाइटको नाम पनि राखिएको छ, ताकि इच्छुकले सम्पर्कमा रहन सकून् ।
फाइन्ड मलिक ए वाइफ वेबसाइटमा रहेको भिडियोमा मलिकले एक उद्यमी, खानपान, धार्मिक र उनको दिनमा काम गर्ने कसैको खोजीमा रहेको बताएका छन् । साथी खोज्नको लागि उसले यस्तो अपरंपरागत विधि किन रोज्यो भनेर, मलिकले साइटमा यसो भनेका छन्- 'मैले अहिलेसम्म आफ्नो सहि जीवनसाथी फेला पारेको छैन । यो त्यहाँ गाह्रो छ । मैले यसका लागि बिलबोर्ड ल्याउनु पर्यो !'
मलिकले यो पनि बताउँछन् कि उनी अरू कुनै कुरामा "व्यक्तित्व र विश्वास" मा रुचि राख्छन् र फाइन्ड मलिक अ वाइफमा उनले यी विज्ञापन मजाक नभएर गम्भीर रहेको बताएका छन् । मलिकले आफु एरेन्ज विवाहको विरोधमा नरहेको बताउदै धेरै इस्लामिक संस्कृतिहरूमा एरेन्ज विवाहको ठाउँ र परम्परा छ तर आफु केवल आफ्नै प्रयासमा कसैलाई खोज्न चाहेको बताएका छन् ।